घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? सिमेन्टको उत्पादन मिति र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने अवधि कसरी थाहा पाउने ? - IAUA
उपभोक्ताले सिमेन्ट किन्दा सबैभन्दा पहिले उत्पादन मिति थाहा पाउन यसको ब्याच नम्बर हेर्नुपर्छ। कम्पनीले उत्पादन गर्दा बोरामा वर्षमा ५२ हप्ताअनुसार ५२ वटा ब्याच नम्बर राखेको हुन्छ। २०७३ वैशाख १ गतेखि ७ गते सम्मको समयमा उत्पादित सिमेन्टमा २०७३र१ लेखिएको हुन्छ। त्यस्तै यदि बोरामा २०७२र५२ लेखिएको छ भने त्यो सिमेन्ट २०७२ चैतको अन्तिम हप्तामा उत्पादित हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।
विनाशकारी भूकम्पका कारण भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढिरहँदा सिमेन्टको माग पनि बढ्दो छ।
उपत्यका लगायत ३२ जिल्लामा क्षति भएका ६ लाख भन्दा बढी भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्दछ। भूकम्पबाट अति प्रभावित १३ जिल्लामा अहिले सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान रकम र आफ्नै खर्चमा निर्माण कार्य तिव्रताको साथ सुरु भएको छ।
सरकारले पनि अति प्रभावित जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधक भवन तथा घर निर्माणका लागि २५ सय भन्दा बढी प्राविधिक इन्जिनियर खटाइसकेको छ। सरकारले भूकम्पले भत्काएको संरचना निर्माणको लागि सर्वसाधरण जनतालाई भूकम्प प्रतिरोधक घर टहरा निर्माणका लागि किस्ताबन्दीमा रकम समेत उपलव्ध गराउन थालेको छ।
कतिपय भूकम्पपीडितले सरकारले पैसा नदिए पनि पुरानै शैलीमा घर बनाइ सकेका छन्। सरकारले भने भूकम्प प्रतिरोधक घर नबनाउने अर्थात तयारी १७ घरको मोडेल अनुसार नबनाए अनुदान रकम नपाउने भनेपछि कतिपय पुनः भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने सोच सोचमा छन्।
जस्तै २०७३ वैशाख १ गतेखि ७ गते सम्मको समयमा उत्पादित सिमेन्टमा २०७३र१ लेखिएको हुन्छ। त्यस्तै यदि बोरामा २०७२र५२ लेखिएको छ भने त्यो सिमेन्ट २०७२ चैतको अन्तिम हप्तामा उत्पादित हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।
विभागले गरेको तयारीमा सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरुले पनि स्वागत गरिसकेको छन्।
Previous Previous post: घर निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
Next Next post: जग्गा किन्दा ध्यान दिनपर्ने कुराहरु